बिर्सने बानीसँग कसरी जुझ्ने? - BBC News नेपाली
उमेर बढ्दै जाँदा हामी आफ्नो दिमागलाई सकेसम्म तीक्ष्ण राख्न चाहन्छौं। तर दिमागलाई चनाखो राख्ने उपाय के के हुन् त?
४० उमेर कटेका जो कसैलाई सोध्नुस्, तपाइँलाई सबैभन्दा बढी के कुराले पिरोल्छ? जवाफ आउँछ- स्मरण शक्ति गुम्ने डर।
म चिन्तित हुन्छु कि मलाई नाम सम्झन कठिन हुन्छ र मलाई सम्झाउने फोन भएन भने म थुप्रै दैनिक भेटघाटको काम पनि बिर्सिन्छु।
तपाइँ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य अवस्था राम्रो राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै केही कुराहरु छन् जसलाई तपाइँले त्याग्न सक्नुपर्छ।
जस्तै कि धुम्रपान, ज्यादा तौल र टाइप टु डाइविटिज। तर दिमागलाई बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ?
न्यूक्यासल विश्वविद्यालयको सहयोगमा ३० जना स्वयंसेवीहरुमार्फत हामीले यो कुरा खोज्ने प्रयास गरेका थियौं।
प्रगतिको एक भाग त नयाँ शीप सकेको कारणले देखियाो। केही नयाँ कुरा सिक्दा त्यसले दिमागलाई सक्रिय बनाउँछ।
डेनियल कोलेरटोन, क्लिनिकल मनोचिकित्सक
कला कक्षामा सहभागी भएपछि मेरो लेखाइको गति बढेको छ र एकाग्रतामा सुधार आएको छ। म ठ्याक्कै यसलाई व्याख्या गर्न सक्दिन तर मलाई यत्ति थाहा छ कि यसले केही फरक पारेको छ।
लिन, एक स्वयंसेवी